Golaha wakiillada Puntland oo wasiirka maaliyadda su’aalo ka weydiiyay miisaaniyadda – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta arrimaha miisaaniyadda waxay su’aalo kulul ka weydiiyeen wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi iyo saraakiil sar sare oo wasaaradda ka tirsan.
Kulanka maanta ayaa ahaa kii 23aad ee kalfadhiga 43aad ee golaha wakiillada oo dib u bilawday 22kii bishan.
Doodda golaha ayaa inteeda badan ku dhisnayd miisaaniyadda saggaalka bilood ah ee toddobaadkii hore la hor-geeyay oo dhamaanteed ah mid laga soo dheegtay tii sannadkii hore. Kororka dhakhli ee la filayay iyo iyo madaxyada qaarkood oo ay ahayd in wax lagu daro ayaa qayb ka ahaa su’aalaha.
Wasiirka maaliyadda Xasan Shire Cabdi ayaa hore golaha ugu sheegay sababaha dakhli yaraanta Puntland oo uu ku sheegay dhoofka xooluhu uu hoos u dhacay, canshuurihii dekedda oo aan dowladdu helin iyo in canshuuraha berriga qudhoodu ay hoos u dheceen isla markaasna ay doonayaan in ay wax ka qabtaan.
Doodda miisaaniyadda Puntland ee sanadkan ayaa Axadda sii socon doonta waxayna u badan tahay in berri baarlamanku go’aan ka gaari doono.
Xildhibaan Jeesow: Haddii ay Wasiiradu imaan waayaan Kulanka Golaha Shacabka Mooshin ayaan ka keeneynaa